Hoyga - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
U dagaalamida cadaalad iyo soo dhaweyn Colorado oo dhan.
Warbixintayada cusub ayaa faahfaahinaysa sida ICE ay u isticmaalayso shirkadaha teknoolajiyada si ay uga gudubto sharciyada iyo siyaasadaha quduuska ah ee Colorado! Wax dheeri ah baro
Waxaan ku talaabsaneynaa dhanka cadaalada iyo soo dhaweynta Colorado oo ay sii kordhineyso taageerada deeq-bixiyeyaashayada. Ku deeqidaadu waxay xaqiijineysaa inaan sii wadi karno inaan u dagaallano xuquuqda dhammaan muhaajiriinta ku baahsan gobolka. Fadlan ka fiirso bixinta maanta!
Saxeex liiskayaga mutadawiciinta ah si aad noogu taageerto shaqadeena. Tabaruce ahaan waxaad naga caawin doontaa u doodida siyaasadaha aadanaha iyo soo dhaweynta, martigelinta muwaadinimada bilaashka ah, DACA, iyo aqoon isweydaarsiyada kaararka cagaaran, iska caabinta ku takri-falka awoodda ee ICE, iyo wax badan oo dheeri ah!
Shabakadeena dhijitaalka ah waa aalad firfircoon oo firfircoon - waxaan u adeegsanaa qaraxyada emaylka si aan kor ugu qaadno feejignaanta waxqabadka muhiimka ah, u faafinno ku saabsan dhacdooyinka soo socda, una wadaagno cusbooneysiinta xilliyada ku saabsan ururkeenna iyo horumarka ololaheenna.
CIRC waa isbahaysi ku saleysan xubinimada gobolka oo dhan oo ah soogalootiga, shaqaalaha, diimaha kala duwan, dhalinyarada iyo ururada isbahaysiga oo la aasaasay 2002 si loo dhiso cod mideysan oo gobolka oo dhan ah si loo wanaajiyo nolosha muhaajiriinta iyo qaxootiga ku nool Colorado iyo Mareykanka. CIRC waxay ku guuleysaneysaa himiladan iyada oo loo marayo kaqeybgalka bulshada ee aan xisbiyada ahayn, waxbarashada dadweynaha iyo u-qareemeynta si loogu guuleysto siyaasadaha dadweynaha ee caddaaladda, aadanaha iyo shaqada leh.
Saxiix si aad uga qayb gasho
Goobta Isbahaysiga Gobolka Galbeedka Slope: Jiirada Galbeedka ee Colorado oo diiradda saareysa Telluride, Durango, iyo gobolka afar geesoodka ah. Waxa laga yaabaa in la waydiiyo in ay ka shaqeeyaan qaar ka mid ah Ridgeway, Gunnison, Montrose, iyo marmar ilaa Waqooyiga ilaa Grand Junction, gaar ahaan...
Goobta Isku-dhafka ah ee Buuraleyda Rocky: Buuraleyda Rocky ee Colorado (meel kasta oo ka timaada Salida, Leadville, Summit, Steamboat, Glenwood Springs, Rifle, Aspen, iwm). Riix halkan si aad u aragto khariidadda buuxda ee xubnaha Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Mas'uul ka ah taageeridda CIRC...
Waqooyiga CO Goobta: Waqooyiga Colorado, oo ay ku jiraan Larimer, Weld, Logan, Boulder, Morgan, Washington, Yuma counties, iwm Waxaan aad ugu dhiirigelineynaa dadka ka socda Degmooyinka Weld, Morgan iyo Yuma inay codsadaan. Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Mas'uul ka ah taageerada...
Saxiix Liiska War-Saxaafadeedka